Pikantsary mody amin'ny soroka misokosoko - mitafy, asymmetrika, tokotokony, miaraka amin'ny tadiny
Pompier amin'ny soroka misokatra - inona ary ary inona no tokony hosoloana akanjo miaraka amin'ny soroka?
Ny panty misy pentina misokatra dia mahaliana sy mahalana. Manampy ny tompony hihazona hafanana na dia ao anatin'ny toetr'andro mangatsiaka indrindra aza, ary amin'ny fotoana iray ihany, hanehoana ny fahamendrehana, ny fitiavana sy ny fahasoavan'ny Silhouette. Ny zavatra toy izany dia tonga lafatra amin'ny daty mahafinaritra, saingy mety amin'ny toe-javatra hafa izany.
Pikantsary mody miaraka amin'ny soroka misokatra
Ny panty mitaingina miaraka amin'ny akanjo marevaka dia mijery tsara ny tovovavy misy tarehimarika, raha toa izy afaka mirehareha ny hoditra mamy sy mahafinaritra. Ity karazan-tsakafo ity dia afaka manana karazana maromaro. Noho izany, ny fiantraikan'ny soroka misokatra dia omena amin'ny fanampiana ny plastika, ny tendany avo, ny fampisehoana ny soroka na ny fisarahana tsy mahazatra. Ireo antsipiriany rehetra ireo dia manao sweater miaraka amin'ny soroka misafotofoto tsy misy dikany sy tsy mampino, noho izany dia malaza amin'ireo ankizivavy sy vehivavy izay te-ho eo an-toerana.
Mpivarotra kiraro miaraka amin'ny soroka misokatra
Ny hatsembohana kiraro mitongilana dia manintona sy mahavariana. Mety misy endrika tsotra sy laconic raha toa ka nampiasaina tamin'ny fomba famolavolana na hosiery ny fomba fiakarana, na dia mamirapiratra sy tany am-boalohany raha toa ka nibodo kofehy lava lava sy tadin-damba, tady sy aranas, fifanakalozan-javatra samihafa na jakquard.
Satria ny toe-javatra toy izany amin'ny toe-javatra sasany dia afaka manampy ny habetsahan'ny vatany ambony, ny vehivavy manana endrika mihomehy dia tokony ho raisina amim-pitandremana manokana. Noho izany, ny "pyshechkam" dia tsy soso-kevitra hanome modely amin'ny modely mifototra amin'ny endriny, vokatra amin'ny fitifirana lehibe sy ny safidy mazava.
Anklefy ny iray amin'ny soroka iray
Ny fitsipiky ny asymmetria izay manome endrika ivelany ny akanjon'ny vehivavy dia ampiasain'ny mpanakanto sy ny mpahaikanto mandritra ny fotoana lava. Tao anatin'izay vanim-potoana vitsivitsy lasa izay, ireo akanjo toy izany dia manana ny lazany ho toy ny any am-piandohan'ny laza ary manana fangatahana goavana eo amin'ny ankizivavy sy ny vehivavy. Ohatra, zatovovavy tanora matetika dia misafidy satroka asymmetrika miaraka amin'ny soroka mitongilana, izay mety hahatonga ny sarin'izy ireo ho mahaliana sy tsy mahazatra. Ity tsipiriany ity dia mitongilana sy milamina, noho izany dia tsara indrindra ny daty am-pitiavana na ny antoko club.
Polisy lehibe miaraka amin'ny soroka misokatra
Ny zavatra volumetika avy amin'ny kofehy matevina no tena mahaliana ary lasa ny lantona lehibe indrindra amin'ny sary. Ao amin'ny vokatra toy izany dia saika tsy azo atao ny mangatsiaka, noho izany dia mamoaka azy ireo ivelan'ny trano fisakafoanana ny ankizivavy sy ny vehivavy amin'ny fanombohan'ny andro mangatsiaka. Raha toa ka misy famotehana tany am-boalohany ny zavatra mitovitovy amin'izany, dia azo antoka fa hanintona ny fifantohan'ireo olon-kafa amin'ny tompony izy ary hanao azy ho mpanjakavavy.
Ny paompy lehibe amin'ny filaharam-be iray na amin'ny modely iray mitovy amin'ny rojo-bar dia maneho ny vatan'ny vehivavy iray, izay ahitan'izy ireo ny fakam-panahy sy ny firaisana. Hatramin'ny nahaterahan'ilay vokatra dia sary tsy mahazatra, dia soso-kevitra ny hampifangaro azy amin'ny zavatra tsotra sy tsotra ao amin'ny garderobe, ohatra, jeans malaza na pataloha marevaka.
Mpivarotra akanjo mipetaka eo amin'ny soroka sy ny pesta
Mpivaro-pirao-pirao-piraisam-bolo tena tsara tarehy amin'ny fery eo amin'ny soroka, miloko volom-paradisa, dia manjavozavo fotsiny. Mampihetsi-po kely ny vatany izy, raha miala amin'ny sary maotina sy ny vehivavy. Ny zavatra toy izany miaraka amin'ny kiraro sy kiraro avo loha dia azo atao amin'ny antoko mpihira na ny hetsika hariva tsy ara-potoana. Tena mahaliana indrindra raha manana loko avo sy loko maizim-be izy.
Anklefy ny akanjon'ny akanjony
Ho an'ireo kiraro tsy mahazatra sy ireo hetsika tsy ara-potoana, ny akanjo mareva-pofona iray miaraka amin'ny soroka misokatra, izay mamorona endrika fijery vehivavy sy tsara. Miaraka amin'ny boatin-kiraro marevaka amin'ny solaitra manify na kiraro tsara tarehy, dia hanao endrika kanto sy lamaody izy, izay tsy hisy vehivavy tsy ho hitan'ny maso.
Mba hahatonga ny sary toy izany hahatalanjona sy hita maso kokoa, ny vokatra mitovy amin'izany dia tsy azo atao amin'ny fomba nentim-paharazana, fa amin'ny fampiasana ny asymmetrie, izany hoe, amin'ny iray soroka iray. Amin'ity tranga ity, ny tsiambaratelo iray dia hahatonga ny eritreritra tsy hay lazaina amin'ny hafa, eny fa na dia ny tsotra fotsiny aza dia toa tsotra sy laconic.
Ny panty ho an'ny sipa miaraka amin'ny soroka misokatra
Ny volombava be volon-davenona miaraka amin'ny soroka miolakolaka dia mampitombo ny ampahany ambony amin'ny silhouette, ka izany dia tsara ho an'ny tarehintsoratra maromaro. Mandritra izany fotoana izany, amin'ny zazavavy marefo sy malefaka, dia mitovy ihany koa izy. Na dia toa mitovy aza ny vokatr'io vokatra io raha toa ka diso ny maoderiny amin'ny halavany 2-3, dia tsy manjelanjelatra izy ary tsy mamela ny fahatsapana ny havesa-danja, ny habibiana ary ny tsy fahamendrehana.
Ankona eny am-bozaka miaraka amin'ny soroka misokatra
Ny iray amin'ireo karazan-javatra mahaliana indrindra sy ny tany am-piandohana ny akanjo toy izany dia akanjo am-patana misoko sy havoana avo. Ny tsindrimandry mamirapiratra sy mahazendana io akanjo io dia mifototra amin'ny fifanoheran-javatra hita eo amin'ny tenda mihidy sy ny hoditra mangatsiaka ao amin'ny faritra soroka. Noho izany, ao anatin'ny vokatra iray toy izany, ny fiaraha-miory sy ny firaisana ara-nofo dia mifamatotra amin'ny fahamaotinana sy ny fifehezana, izay toa tsy dia mahazatra loatra sy manintona.
Ity modely ity dia aseho amin'ny karazan-javatra isan-karazany, izay manintona ny mason-tsivana ary miteraka fiderana marina. Noho izany, mijery ny hatsembohana fotsy tsara tarehy miaraka amin'ny soroka misokatra ary tenda feno mihidy. Ity zavatra ity dia mifamatotra tanteraka amin'ny pataloha mahazatra, karazana jeans sy skirt rehetra. Ankoatr'izany dia afaka mampiditra fitaovana isan-karazany izy, ohatra, ny pendriky mamirapiratra sy ny kavina, ny felam-bolo madinika ary ny toy izany.
Asymmetrika misy satroka misokatra
Ireo mpankafy amin'ny fampakaram-bady tsy azo antoka dia ho toy ny satroka asymmetrika misy lavaka eo amin'ny soroka, izay mety ho lavalava kokoa sy lava latsa-paka, samy hafa amin'ny halavan'ny tohatra na ambany matevina. Ity modely ity dia natao ho an'ny akanjo isan'andro ary mifanandrify tanteraka amin'ny zavatra ao am-pandriana amin'ny sehatra tsy mahazatra.
Ohatra, ny satroka asymmetrika mivangongo dia mifamatotra indrindra amin'ny akanjo hoditra sy pataloha, "jeans ragged" na kibatra bitika vita amin'ny denim miaraka amin'ny fringe. Ho an'ity gizmo ity dia afaka manangona zipo mahaliana amin'ny fanontana tany am-boalohany ianao na vokatra miaraka amin'ny printy manintona sy mahatsikaiky. Ny akanjo tsy mahazatra koa dia hijery tsara amin'ny felam-pasika mamirapiratra sy tena izy.
Inona no hosotroina miaraka amin'ny soroka misokatra?
Na dia manambady vehivavy marobe aza ny sweater miaraka amin'ny soroka misafotofoto, tsy ny vehivavy rehetra amin'ny lamaody no mahatakatra ny fomba hanaovana azy tsara. Ity zavatra ity dia manana endrika ivelany sy mamirapiratra, noho izany dia manintona foana ny saina ary lasa ny lantona lehibe amin'ny endrika lamaody. Na dia izany aza, tsy midika izany fa tsy misy afa-tsy amin'ny zavatra monotone sy saika tsy hita maso ao amin'ny garderobe.
Raha ny marina dia misy valiny marobe amin'ny fanontaniana momba ny fomba fanaovana ny panty amin'ny soroka misokatra. Ity vokatra tsara tarehy sy tsy mahazatra ity dia mifanaraka tanteraka amin'ny pantalon-tanana sy jeans, skirt sy shorts ary karazana akanjo sasany. Ny modelim-pitaovana maro an'ireny zavatra ireny dia azo raisina ho toy ny vokatra tsy misy afa-tsy - feno kiraro marevaka sy kiraro maivana, afaka ny ho loharano faran'izay tsara amin'ny efitra hariva izy ireo.
Ny paompy tsara tarehy miaraka amin'ny soroka mitentina amin'ny tranga rehetra dia manantitrantitra ny maha-vehivavy ny mpanangona azy, noho izany dia ampiasaina indrindra ho an'ny daty am-pirahalahiana sy ny antoko club. Mba hahafahana mijery ny zava-mitranga toy izany, ary ny handresy ny manodidina anao dia azonao atao ny mampiasa ny iray amin'ireto sary manaraka ireto:
Ny fampiroboroboana ny fanatanjahan-tena isan-kerinandro dia azo avy amin'ny fampifangaroana akanjo misy akanjo malefaka sy mofomamy mofomamy na sipa . Amin'ny tongony amin'ity tranga ity dia manolo-tena ny hitafy kiraro, kitapo, mokasinina na kiraro baolina. Raha tsy mieritreritra ny androm-piainany ny fombanisma, dia hanao ny sambo klasika amin'ny vodiazy;
Tsara sy mahafinaritra ny mijery ity zavatra ity miaraka amin'ny leggings matevina. Ampitao ny sarin'ny kiraro miaraka amin'ny bootleg avo - kiraro na kiraro. Ity safidy ity dia tonga lafatra amin'ny daty mahafinaritra, fialam-boly na fihaonana miaraka amin'ny namana;
Ny endrika lamaody marefo dia tsara raha azo ampiasaina amin'ny sary iray misy pneu miaraka amin'ny soroka mivelatra sy pensilihazo henjana. Io fitambarana io dia mety ho an'ny asa aza, raha toa ny birao tsy manaja ny fehezan-dalàna ofisialy.
Ny jaky ny vehivavy miaraka amin'ny kapa - ny modely modely amin'ny fotoana rehetra
Ankamantatra Bona Fide
Birao ho an'ny zazavavy
Korset - fitaovam-piadiana miafina amin'ny mpamitaka
Kiraro tsy misy fehiloha
Ny Gemini sy ny kansera - Fifandraisana amin'ny fitiavana
Manambara ny tsiambaratelon'ny masoivohom-panjakana amerikana izahay: 22 ny zava-misy momba ny sampandraharaham-piarovana izay nivoaka
Crafts from cork
Manamboatra zava-pisotro anaty trano
Jelgava - toetoetran'ny mpizahatany
Fialantsasatra any Gresy amin'ny Septambra
Inona no mofomamy ho an'ny marika maromaro kokoa ho an'ny vehivavy bevohoka?
Varietes of apricot
Vehivavy lava lava lava
Harona miaraka amin'ny voatabia
Ahoana ny fomba hisarihana ny lehilahy?
Asidra fetsifetsy polyunsaturated
Kolontsaina - Spring Fashion 2014